अन्य | suryakhabar.com | Page 4
काठमाडौँ । युके निबासी गीतकार घन बहादुर थापाको गीति एल्बम ‘नबिर्स’ एक भब्य समारोह बीच काठमाडौँमा बिमोचन गरिएको छ । लामो समय देखि युके बस्दै आएका गीतकार थापाको यो चौथो एल्बम हो ।...	Read more
on: October 25, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
काठमाडौँ । एशियाको साहित्य, कला, संस्कृति, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, विकासलगायत विषयमा बौद्धिक छलफल गर्ने उद्देश्यले प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय एशियाली अध्ययन सम्मेलन यहाँ आज शुरु भएको छ ।...	Read more
on: October 24, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
काठमाडौँ । नेपाली साहित्यको विकास तथा विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएबापत डा. तारानाथ शर्मा (तारानाथ भण्डारी) लाई ‘पद्यश्री साधना सम्मान’ र आख्यानकार नयनराज पाण्डेको सस्मरण सङ्ग्रह ‘यार’ला...	Read more
on: October 17, 2018 In: अन्तर्राष्ट्रिय, साहित्यTags: No Comments
चेङ्दु । विश्वमै सबैभन्दा लामो लोककाव्य मानिएको राजा गेसारको काव्यको सङ्कलन अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०१९ प्रकाशन गरिने भएको छ । “इपिक अफ किङ गेसार” नाम दिइएको यस महाकाव्यमा एघारौं शताब्दीमा क...	Read more
on: October 14, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
ललितपुर । कथाकार शुष्मा मानन्धरको लघुकथा सङ्ग्रह ‘अनावरण’ बजारमा आएको छ । पेन नेपालद्वारा शनिबार आयोजित लोकार्पण समारोहमा चौबीस कथाको सो सँगालो साहित्यकार रामकुमार पाँडे, विनय कसजु, श्रीओम र...	Read more
on: October 13, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
काठमाडौँ । संस्कृतिविद् एवं वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई आज सम्मान र अभिनन्दन गरिएको छ । नेपालका सच्चा सपूत, असली रत्न, नेपाली ज्ञानोदयका सूत्रधार, नेपाल राष्ट्रका गौरव, अजम्बरी राष...	Read more
नीलम कार्कीलाई मदन पुरस्कार अर्पण
on: October 12, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
काठमाडौँ । मदन पुरस्कार गुठीले २०७४ मदन पुरस्कार नीलम कार्की निहारिकलाई अर्पण गरेको छ। ललितपुरको पाटनढोकामा बिहिबार आयोजित समारोहमा मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले पुरस्कार हस्ता...	Read more
on: October 10, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
-धिरेन अनुपम गजल तिमीले त राख्नै सकिनौ आखाँमा आफैलाई । हेर मैले छोडेर आए तिम्रो दुनियामा आफैलाई । बैशाखी टेकेर उभिन त पाउँ नहुनेहरु पनि सक्छन्, मान्छे हुन उभ्याउन सक्नु पर्छ खुट्टामा आफैलाई...	Read more
on: October 09, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
— खगेन्द्र गिरि ‘कोपिला’ हेमन्त ऋतुको चिसो दिन । सिरक ओढेर ओछ्यानमैं गुट्मुटिदै बसिरहुँ जस्तो अल्छिलाग्दो छ वातावरण । एकाबिहानै लमहीबाट छविलाल कोपिलाको फोन आयो —‘मिटवा ! आज टो सुनछहरी जैना ड...	Read more
on: October 08, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
गजल दिने चलन छैन यहाँ, जसलाई पुग्दैन । यत्रो सेवा सुबिधा नि, दशलाई पुग्दैन ।। अब रेल नै अायाे भने, के-के बाेक्छ खै ? अहिलेसम्म भए जति, बसलाई पुग्दैन ।। विविधता मै एकजुट भए, जति पनि छ । कित्त...	Read more
on: October 07, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले साहित्यिक सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने भएको छ । नवनियुक्त कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले आज पदबहालीका क्रममा उक्त सङ्ग्रहालयमा भानुभक्तदेखि अहिलेसम्मका स्थापि...	Read more
नुवाकोट । जिल्लाका दुई स्रष्टाको कृति आज यहाँ विमोचन गरिएको छ । बेलकोटगढी नपा–७ महादेवफाँटमा आयोजित कार्यक्रममा रामकृष्ण गजुरेललेका मुक्तक सङ्ग्रह ‘कर्कलाको पानी’ र भगवती खनालको गजल सङ्गह ‘म...	Read more
on: October 06, 2018 In: प्रवास, साहित्यTags: No Comments
काठमाडौं । जापानमा हालै सम्पन्न भएको हाइकु महोत्सवमा नेपालका चचिर्त साहित्यकार तथा कूटनीतिक व्यक्ति कृसु क्षेत्रीको नवीनतम् हाइकु संग्रह नीलो आँसुको लोकार्पण भएको छ । कार्यक्रममा जापानका चर्...	Read more
on: October 04, 2018 In: प्रदेश 2, साहित्यTags: No Comments
काठमाण्डौ । नेपालका चर्चित अर्बपति उद्योगी बिनोद चौधरीको आत्मकथा हिन्दीमा प्रकासन भएको छ । आफनै संघर्षले सन्सारका अर्बपतिहरुको सूचिमा पर्न सफल नेपाली उद्यमी चौधरीको आत्मकथा नेपाली , हिन्दी ,...	Read more
पहाडीको ‘युद्ध निषेध: शान्ति विशेष’ सार्वजनिक
on: October 01, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
काठमाडौँ । मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीको नयाँ पुस्तक ‘युद्ध निषेध: शान्ति विशेष’ सार्वजनिक भएको छ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति पहाडीका विशेष आलेखलाई पुस्तकमा समावेश गरि...	Read more
काभे्रपलाञ्चोक । जाग जाग जाग लौ जाग, देशका हे वीर सन्तति सबै मिली देश जोगाउन, मरिमेटी गरौँ उन्नति काँधमा काँध मिलाई छातीमा छाती जोडी देश निर्माण गर्नलाई बढ्दै जाऊँ सरासरी १ दुई दशकअघि कविताम...	Read more
काठमाडौँ । लेखक सङ्घर्ष क्षेत्रीद्वारा लिखित प्रेमकथामा आधारित उपन्यास ‘साकुरा’ सार्वजनिक गरिएको छ । क्षेत्रीको सो पहिलो कृतिको आज राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अध्यक्ष एवं साहित्यकार हरि...	Read more
काठमाडौँ । शमी साहित्य प्रतिष्ठानको चौंथो वार्षिक साधारणसभाले साहित्यकार एवं राजनीतिक प्रदीप नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । संस्थाको उपाध्यक्षमा श्रीओम श्रेष्ठ रोदन, सचिवम...	Read more
बागलुङ । प्रेम छोटा ७४ वर्षको भए । संस्कृतिको खोज, अनुसन्धानमा ४५ वर्ष बितेसके । ‘बागलुङको सांस्कृतिक आकाशमा नाटकीय इन्द्रेनी–२०७५’ उनको ३२औँ कृति हो । लोक संस्कृतिमा मात्रै आधारित कृति १२ व...	Read more
on: September 26, 2018 In: साहित्यTags: No Comments
-बीरभद्र आचार्य यो माटोले दियो जन्म तिमीलाई यो माटोको नै हो ऋण तिमीलाई बाबुमा शुक्रकीट भएर हुर्कियौ आमाले मनुष्य चोलामा हुर्काइन् । आयौ त कहाँबाट आयौ कुनै नक्षत्र वा कुनै ग्रहबाट ? फेरी आकाश...	Read more